၂၀၂၀ အတွက်အာဗြဟံလင်ကွန်းကိုးကား - Pedia ကိုးကားသည်
အာဗြဟံသည်လင်ကွန်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၁၆ ယောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်နိုင်ငံသားအဖြစ်သာမကရှေ့နေလည်းဖြစ်သည်။
သမ္မတအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းသူသည်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မှတစ်ဆင့်အမေရိကန်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာတိုင်းပြည်တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှတွင်အကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်သူသည်ကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏တစ်သက်တာလုံးသူအမြဲလွှမ်းမိုးခဲ့သည် သူ၏စကားများနှင့်အတွေးများမှတဆင့်များစွာသောအားပေးခဲ့တယ်.
အချို့ကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့ Abraham Lincoln ကိုးကားချက်များ။ သူက“ မင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထားပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာသူကလူအားလုံးအားမှန်ကန်သောအရာကိုရှာဖွေရန်နှင့်မည်သည့်ကတိက ၀ တ်ကိုမျှမပြုမီသူတို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုသေချာစေရန်အားပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဖန်တီးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်တည်ချက်ကိုရပ်တည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုတည်မြဲရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးမှနုတ်ထွက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုဘယ်တော့မျှရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘဝတွင်အဓိပ္ပာယ်တစ်စုံတစ်ခုမျှရှာမတွေ့ပါ။
သူက "ငါဖြေးဖြေးလမ်းလျှောက်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်လှည့်မသွားဘူး" ဟုလည်းပြောခဲ့သည် ၎င်းမှတစ်ဆင့်သူသည်ဖြည်းဖြည်းသွားရန်အဆင်ပြေသည်ဟုဆိုလိုလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဘဝဖြတ်သန်းသွားစဉ်ကျွန်ုပ်တို့အားပြန်သွားစေသည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပြုလုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
နောက်တစ်ခု အာဗြဟံလင်ကွန်း Quote ဖှယျ "မင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအဲဒါကိုဖန်တီးဖို့ပါ" လို့ပြောတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်သင်လိုချင်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အနာဂတ်ကိုသင်လိုချင်သည့်ပုံစံကိုပုံဖော်ရန်အခြားသူများသို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေကမင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံသွင်းနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့နည်းလမ်းကိုလုပ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောကွောကျရှံ့ကိုးကား လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကလူတွေကိုကြည့်ဖို့အမြဲတမ်းရှိခဲ့တယ် လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လင်ကွန်း.
ငါဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်သော်လည်းငါဘယ်တော့မှနောက်ပြန်လမ်းလျှောက်။ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်
၎င်းသည်“ ပြိုင်ပွဲကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ အနိုင်ပေးသည်” ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကလုံးဝမှန်ပါတယ် ပြေးရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်၏အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်
သင်၏အနာဂတ်ကိုအမှန်တကယ်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းမှာ - မှန်ကန်စွာပြောခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်မည်သည့်အရာထက်မဆို ပို၍ အရေးကြီးကြောင်းအမြဲတမ်းသတိရပါ။ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်
သင်မည်သည့်အရာဖြစ်ပါစေ၊ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်
သင်သည်လူများကိုကောင်းသောအနေဖြင့်ပုံသွင်း။ မရပါ၊ ပတ်ပတ်လည်ကလူအများကြီးနှင့်အတူ ...
စည်းကမ်းသည်သင်ယခုလိုချင်သည့်အရာနှင့်သင်အလိုရှိရာကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်
လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ၏ပိုကောင်းသည့်အစိတ်အပိုင်းမှာသူ၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဖြစ်သည်။ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်